စီးရဲဖို့ ပဲလိုပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » စီးရဲဖို့ ပဲလိုပါတယ်
Posted by Shwemannmay on Jun 12, 2010 in Other - Non Channelized |2comments
သိန်း ၃၀ လောက်ဆိုရပြီ။ ဘာကားစီးချင်လဲ။ တော်ပြီဗျာ မတော် လို့ သိန်း ၃၀ ပလုံသွားမှဖြင့်…
ဘာတွေပါလိမ့်လို့ စူးစမ်းမိသည်။ ကိုယ့်အကြည့်ကို ရိပ်မိသည့်မိတ်ဆွေ က ၀လုံးအကြောင်းပြောနေတာဗျ လို့ ရှင်းပြသည်။ ၀လုံးဆိုသောစကားလုံးက အသစ်ဖြစ်ရပြန်သည်။
၀စ်သောက်ကား ကို ပြောတာဗျ။ ခင်ဗျား တတ်နိုင်ရင် ၃၀ လောက်နဲ့ ကားစီးလို့ ရတယ်။ စီးရဲဖို့ တော့လိုတာပေါ့။ ဒီလိုဆိုတော့ ရီစရာအကောင်းသား။ ဒီအသက်အရွယ်ေ၇ာက်မှတော့ ကားများ ဘာခက်တာမှတ်လို့ နော်။ မန်းလေးသူ ပဲ ငယ်ကတည်းက ဘီးနှစ်လုံးကို ပာန်ချက်ညီအောင် ထိန်းပြီး ကျူံးပတ်ဘီးစီးလာတာပဲ။ စက်ဘီးပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်တွေခေတ်စားလာပြန်ေ၇ာ ။အဲဒီတော့လည်း အိမ်က၀ယ်ပေးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကို တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ ၄ နှစ်လုံးလုံး စိတ်ကြိုက်စီးလာတာပါ။
ကားတော့ မောင်းဖူးဘူးပေါ့နော ။ အိမ်က လည်းေ၇ာ့ ငါ့သမီးအတွက် ကားတစ်စီးလို့ ပေးရလောက်အောင် ထောတာမပာုတ်တော့လည်း ကိုယ်ပိုင်ကားတော့ မောင်းဖူးဘူးပေါ့ ။ ဒါပေတဲ့ သူငယ်ချင်းမောင်းတဲ့ပါဘလေကာလေးတော့ တက်ပြီးလျှောက်ကလိဖူးပါတယ်။ ပိာုနားဒီနား မန္တလေးအနီးတစ်ဝိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားရင် ကိုယ်လည်းတက်မောင်းဖူးတာမျိူးတော့ရှိပါတယ်။ ပြောရ၇င်တော့ သိပ်အစိမ်းကြီးတော့ မပာုတ်ဘူးပေါ့လေ။
ထားပါတော့ ၀လုံးအကြောင်းပြန်ဆက်ပါမယ်။ ဆိုတော့ သူ့ စကားအရ ကားက ကိုယ်တက်မောင်းလည်း သိပ်ပြသနာမရှိလောက်ဘူးလို့ ယူဆသည်မို့စိတ်ဝင်တစားစပ်စုမိသည်။ ကျွန်တော်မောင်းရဲပါတယ်။ နည်းနည်း တစ်ရက်နှစ်ရက် ကျူံးပတ်မောင်းလိုက်ရင် လက် ပြန်တွေ့ လာမှာပါ။ လုပ်စမ်းပါဦး။ ဘယ်လိုကားမျိုးစီးလို့ ရမလဲ။ ရှိလားေ၇ာင်းမယ့်သူ။ စီးတာတော့စီးရဲပါတယ်။ စိတ်ချမယ့်ပာာမျိူး ၊နောက်ကြောင်းရှင်းတဲ့ အုံနာမျိူးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ၀ယ်ချင်သားပဲ။
စုံပါတယ်အမရဲ့ ။ အမ ဘယ်လို စာရွက်လို ချင်လို့ လဲ။ ရန်ကုန်ကား ဗျ။ နံပါတ်အမြင့်နော်စသဖြင့်မိတ်ဆွေ က ခပ်ကြွားကြွားပြောသသည်။
ပြီးတော့ဆက်ပြောသေးသည်။ ရန်ကုန်ကလွဲရင်ကြိုက်တဲ့နေရာစီး ရန်ကုန်တော့မစီးနဲ့ 
ဘယ်လိုပါလိမ့်? ကိုယ်ပာာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်စီးပြီဆိုမှတော့ ဘယ်သွားသွား ၊ ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့။ ဘာလဲပာ ?
ဒီကားက ရန်ကုန်ကားအမရ ။ စာရွက်စာတမ်းက အစ ဖရိမ်နံပါတ်အဆုံး အကုန်တူတယ်။သဘောပေါက်လား။ အက်ဆီးဒန့် မဖြစ်စေနဲ့ ၊ ၇န်ကုန်မှာမမောင်းနဲ့ 
ကျန်တာ ကြိုက်တဲ့ မြို့မှာမောင်း အေးဆေးပဲ။ ဘာပြသနာမှမတက်ဘူး။ ဒါကြောင့်စီးရဲဖို့ ပဲလို တယ်ပြောတာ။ တစ်ချိူ့ ကလည်း အသိမ်းခံရမှာဆိုးလို့ မစီးကြဘူး။
စီးရဲ၇င်တော့ ကားလေးတ၀ီဝီနဲ့ စတိုင်ကျကျ မောင်းနေရုံပဲတဲ့။
ပိုက်ပိုက်လေးလည်း ပေါ မယ်
ဒရိုင်ဗင်းလိုင်စင်လေးလည်းရှိမယ်။ ဆိုရင် ကြိုက်၇ာကား စီးလို့ ရပါပြီ။
အမ်…. ဒီလိုကိစ္စမျိုးရှိသလား (ပေါင်ချိန်လေသံဖြင့် မေးသည်)
နယ်များမှာစီးလို့ရပါတယ်…အခုတော့မန္တလေးလဲဝစ်သောက်များဖမ်းနေပါတယ်…… ရန်ကုန်မှာလည်း စီးကြတယ် ဖမ်းရင်တော့ပြေးပေါ့လေ…